Lo | mandimby maharo
Lo	Posted on 29 July 201229 July 2012 by Mandimby Maharo	Anisan’ny nanamarika ny herinandron’ny 23 jolay iny ny fifamaliana teo amin’ny Minisiteran’ny asam-panjakana sy ny lalana saosialy sy ny Birao Mahaleotena miady amin’ny Kolikoly. Ny antony dia nojo ny fisian’ireo mpiadina 52 ho mpiasam-panjakana teny amin’ny Enam noraisina tao anaty lisitra fanampiny. Ny fanazavana azo avy amin’ny Ministera dia ho fitsinjovana sahady ny fandehanan’ny 35% ny mpiasa mpanjakana hisotro ronona amin’ny taona 2015 no antony nampidirana ireo mpianatra ireo. Tsy manaraka ny lalàna mifehy ny fandraisana mpianatra nefa izany hoy ny Bianco satria tsy voafaritra fa azo atao ny manisy lisitra fanampiny. Ho azy ireo dia ireo 192 afaka tamin’ny fifaninana natao ny 23 jona ihany no ankatoavina fa ho raisina ho mpianatra. Ireo olona tafiditra tao anatin’ilay lisitra koa nefa dia manana taratasy fampiatsoana azy ireo hiditra hianatra. Taratasy izay avy ao amin’ny Minfop.
Tsy vao tamin’ity taona ity no nahenona savorovoro toy izao ny handraisana mpianatra eny amin’ity sekoly ambony ity fa efa mila ho isan-taona dia ahitana tranga toy izao hatrany. Izay indrndra no nahatonga ny nandraisana ny Bianco mba ho anisan’ny mpiray ombon’antoka amin’izay fanadinana rehetra atao eny. Izany dia noho ny fahatsapana fa mahery vaika ny kolikoly eo anivon’ity sekoly ity. Tsy ny eny amin’ny Enam ihany nefa fa tsaroantsika koa ny nanafoanana ny fifaninana teny amin’ny sampana DEGS teny ankatso ny taona 2010 noho ny fivarotan’ireo mpiasan’ny oniversite ny laza adina. Maro araka izany ireo nalaim-panahy hividy izany ka afaka tamin’ireo fanadinana nataony. Tsy hay afenina sy tsy takonana izany kolikoly izany raha ny ny eny amin’ny asam-panjakana amin’ny ankapobeny mihintsy no jerena. Ireo tatitra navoakan’ny Bianco no manamarina izany. Raha ny tamin’ny taona 2011 fotsiny ohatra dia mitana ny voalohany amin’ny ahitana izany ny Fitsinjaram-pahefana. Ny Zandarimaria no mitana ny laharana faharoa, arahin’ny Fitsarana ary ny Fadi-tseranana.
Raha ireo zavamisy ireo no zohina dia hita fa mifampitohy. Hatreny an-tsekoly dia efa manjaka ny kolikoly. Raha lazaina amin’ny fomba hafa dia hofanina hanao kolikoly ireo mpianatra ambony. Miorina eo ambony fahalovana ny ho avin’ny firenena. Raha misy araka izany ny fitakian’ireo mpiasam-panjakana ny fampiakaran-karama dia tokony ho takiana amin’ny ho valiny ny fanafoanana ny kolikoly eo amin’ny asa ataony. Raha ho fitsinjovana ireo toerana 35% ho banga tokoa mantsy no antony handraisana olona ka mety nisian’ny kolikoly dia milaza izany fa 35% amin’ireo mpiasam-panjakana dia mety hanao kolikoly amin’ny taona 2015 rehefa mahazo andraikitra izy ireo.
Tags: Enam, MinfopCategories: societé